ODUU MAGAALAA BULBULAARRAA AMMA NU GAHE. – Welcome to bilisummaa
ODUU MAGAALAA BULBULAARRAA AMMA NU GAHE.
“Ilma namaa akka hojii isaatiif duuti itti diqqaata” kan jedhamu adaa dhugaadha.Dubbii kana sababa malee hin kaafne. Odeeffannoo jiru daddafnee isiniin gahuu dhabuu keennaaf dursinee dhiifama isin gaafataa; sababni turreefis dubbii qulqulleeffatuuf akka ta’e beektanii mata duree amma qabannee dhiyaanne kana obsaan nu hordofaa.
“Goobanni Daaccee du’ee ture Bulbulaa keessaan deebi’e” jetti oduun godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Konbolchaa magaalaa Bulbulaarraa nu geette.
Tibba kana gaafa Gurraandhala 22 ,2016 tti mootummaan abbaa irree woyyaaneen jiraattota magaalaa Bulbulaa namoota afurii badii tokko malee ukkaamsee fudhatuun isaa dhaga’ame. Gocha sanyii balleessaa Oromoo kana woyyaaneef karaa ta’uudhaan magaalaa Bulbulaa keessatti kan socho’aa jiran basaastota mootummaan woyyaanee kaawate yoo ta’an isaanis:-
1. Oromoota sammuun namummaa keessaa fuudhamee sammuun harree itti kaa’amee fi
2. Worra odoo Oromoo hin ta’in Oromoodha ofiin jedhan dha.
Basaastonni Magaalaa Bulbulaa kunniinis:-
1. Diittaa Badhaanee Biiftuu
2. Maamud Ayyaanoo
3. Jamaal Haaji Huseem fi kkf dha.
Isaan keessaa DIITTAA BADHAANEE BIIFTUU gaafa Gurraandhala 22/2016 tti namoota afurii “mana kiyya koottaa caatii qamaanaa” jechuudhaan erga waameen booda “fincaanee deebi’aa” jechuudhaan gadi bayee mootummaa woyyaanee foon Oromootaa nyaatuuf beela’eef bilbilee “mana kiyya jiranii koottaa qabaa” jechuudhaan dabarsee kenneera.
WORROOTA INNI KENNE KEESSAA
1. Kormaa Baattolee
2. Qaabatoo Saamatoo
3. Worquu Boonsoo
Jarreen kun erga gaafa qabamaniitii achi buuteen isaanii hin beekamne.
Eegaa maal jennaree? Gochi suukaneessaan OROMOOTA DHIIGAA magaalaa Bulbulaa jiraatan irratti saroota maqaa Oromootiin daldaltuun raawwatame; guutummaa Oromiyaa irratti haaluma wolfakkaatuun raawwatamaa jiraachuun isaa nama hin mamsiisu. Namichattiin Diittaa Badhaanee jedhamtu tun OROMOO DHIIGAA akka isiin hin taanes irra ga’ameera. Sanyiin isii sanyii qadhaa ykn wolaytaa dur loon tissuuf Oromoo Arsiitti gale irraayi.
Oromomarraa nyaattee booda Oromoo nyaatuu jalqabde. Amalli saree kanuma.
Gochi kun lubbuu ajjeedhaan garaa garummaa hin qabu. Qabsoo Oromoo dur kan laamshessee fi saba Oromoo harkaa fi harka kan mursisiise Goobana ture. Adhas qabsoo FXG Oromootaa kan tarkaanfachuu dhooggee karatti hanbisaaru jara kana.
Qeerroon magaalaa Bulbulaa daddafaa wolaytichattii Diittaa Badhaanee jedhamtu tanaa fi worra akka isii garaa Waaqatti addeessaa. Hin hilinaa. Daddafaa balleessaa. Sanyiin isii hin dagaagin!. Haaluma wol fakkaatuun guutummaa Oromiyaa keessatti daddafaa worroota akkanaa tanniin balleessaa. Qabeenna isii bombii fi ibiddaan barbadeessaa. Diinni saba Oromoo guddaan isaan waan ta’eef haleellaan cimaan irratti fudhatamuu qaba.
BILISUMMAAN UMMATA OROMOOTIIF!!
Previous Harargee Bahaa Aanaa Gurawaatti mormii ummata Araddaa Culul kan kaleessaa kana fakkaata
Next ‪#‎OromoProtests‬ OROMIYAA WARAANAAN DOORSISANII HARKA KENNISIISUN WAAN HIN YAADAMNE